Iyo mhino inoratidza yakasimba bhurawu, prune uye vanilla oak mhino nevamwe zvinyorwa zvefodya. Iyo yakazara yakagwinya yekutanga inoratidzira inotapira yakasviba michero uye yakaoma berry flavour. Iyo yepakati palate yakapfava uye inotenderera neine yakasanganiswa yakaoma yemazambiringa uye oak tannins. Iko kupedzisa kureba uye zvinonhuwira zvinotsigirwa zvakare nemauto ma tannins.
Saperavi ndeye autochthonous georgian mazambiringa. Iyo SATRAPEZO Saperavi inogadzirwa nenzira dzechinyakare dze winemaking, mu amphora (Qvevri) yakavigwa mukare yewaini cellar.
Waini yakanaka yeGeorgia tsvuku inoshandisa ruoko kukohwewa Saperavi mazambiringa akarerwa zvishoma nezvishoma munhoroondo Kvevri chiGeorgian dziva waini midziyo, isati yavigwa mugaba rewaini yekudya kweanosvika mwedzi. Kwemwedzi makumi maviri nemakumi matatu 'kukwirira mumuti mutsva wemuouki kunotevera, isati yasvibiswa nemwedzi mitanhatu' bhodhoro kuchembera isati yabuda. Aroma ekuoma vanilla oak uye yakasanganiswa masango michero inoyerera ichienda kune yakanyorova palate ye blackcurrant, alcoholor zvinyorwa, kuibva ma tannins uye kupera kwenguva refu.
Mumabharaki akasarudzwa eKondoli Vineyard mazambiringa anokohwa akasvibira pakutanga kwauguri pazasi pemazambiringa. Izvi zvinoderedza goho kusvika pasi pe4-5 t / ha. Zvinotungamira mukuvandudzwa kwehunhu uye kusangana kwemichero yasara. Pakupera kwaSeptember, mazambiringa akaibva anoiswa-ruoko mumabhokisi madiki uye agadziriswa neruoko kuhwina.
Iyo Ferment inoitika neganda nembeu muQvevri. Mushure mekusakara kwemazuva makumi matatu, waini inosimbiswa uye inoenderera mberi kwemwedzi makumi maviri nemaviri mumapuranga matsva eouki. Iyo waini inonhongwa isina kubikwa. Ruvara rwakadzama rwakadzika. Iyo mhino yakazadzwa neakadzika matsvuku uye matema ma berries, mint mashizha, zvinonhuwira uye vanilla flavour. Wakazara muviri nechitema Cherry jamu. Kutenderera pakati, nyoro uye kunhuhwirira. Nyowani nyowani uye eucalyptus inonyorera yakaenzana neyakaibva yemazambiringa tannins. Kubatsirwa kubva mukuchengetedza kwemamwe makore gumi.